Chaicho chipfeko cheVeracruz, synthesis pakati peMexico neSpanish tsika | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | tsika nemagariro, Mekisiko
Iyo yakajairika koshitomu yeVeracruz inopindura, kune rumwe rutivi, kune autochthonous substrate yenyika ino yeMexico uye, kune imwe, kune simba revaSpanish colonizers. Ichokwadi kuti guta rega rega munzvimbo yeVeracruz uye kunyangwe nyika yese vane zvavo chaiwo zvipfeko, asi pane sutu inotsanangura zvese nyika nemuzinda wayo.
Sezvo Veracruz iri kumabvazuva kwemahombekombe e Mekisiko uye ine inodziya inotonhora mamiriro ekunze, ayo akajairwa zvipfeko anofanirwa kuve, nechisimba, mwenje uye usanyanya kudziya. Avhareji tembiricha inodarika makumi maviri madhigirii haigone kutsungirira gore rese nehembe dzinodziya. Asi kune zvimwe zvakawanda zvinhu zvakatemera iyo chaiko chipfeko cheVeracruz. Kana iwe uchida kuvaziva, tinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 Nhoroondo yeyakajairika jasi reVeracruz
2 Yakadii sutu yejocho
2.1 Iyo chaiyo Veracruz koshitomu yevakadzi
2.2 Iyo yakajairika koshitomu yeVeracruz yevarume
3 Jasi rejalocho rinoshandiswa riinhi
Nhoroondo yeyakajairika jasi reVeracruz
Chinhu chekutanga chatinofanira kunongedzera kwauri ndechekuti nyika yeVeracruz inoshandisa iyo charro sutu and the Wadhi yeTehuano. Iyo yekupedzisira ndiyo yaishandiswa nevakadzi vechiZapotec venyika ye Oaxaca uye akafuridzirwa nemupendi Frida khalo mune zvakawanda zvemifananidzo yake. Asi zvese izvi uye zvekutanga zvazove zviratidzo zvepasi rese zveMexico. Naizvozvo, hazvizokushamisa iwe kuti ivo vakajairika veVeracruz.
Kunyangwe zvese zvatichangobva kukutsanangurira, zvakajairika zvipfeko zveVeracruz par kugona zvinodaidzwa sutu yejocho, iyo inobva kune inonzi inonzi Sotavento VeracruzanoNdokunge, yedunhu renyika zvinomirirwa izvo zvinowedzera nekumaodzanyemba kweiyo imwe. Zvakare, chipfeko ichi chine nhoroondo inonakidza kwazvo.
Zvinonzi vakadzi vekutanga vakasvika nemaSpanish ku Papaloapan basin vaipfeka hembe dzaiunzwa kubva kuIberian Peninsula. Vakanga vari Andalusian kana Levantine dhizaini zvipfeko yakagadzirwa nemicheka yakasviba uye inorema. Asi munzvimbo ino yeVeracruz, sezvatakakuudza, kunopisa uye, mukuwedzera, hunyoro hunonyanya. Naizvozvo, zvipfeko zvakaunzwa kubva kuSpain zvaive zvisina kukodzera, nekuti zvaive zvakagadzirirwa nzvimbo dzinotonhora.
Masutu evakadzi aya aive nemasiketi ane mavara, epuroni yakashongedzwa, shawl yemucheka, masokisi esotoni neshangu dzevelvet. Uye zvakare, ivo vaive vakashongedzwa nemenduru dzakasungirirwa pamutsipa nemarabhoni esiriki kana velvet pachayo.
Veracruz yakajairika koshitomu yevakadzi
Nekudaro, vakadzi vepo vaipfeka masiketi ane maruva uye mabhurauzi ane bobbin lace uye akadonhedza mapendekete, pamwe neshangu mune chimiro chemakaki. VaSpanish vakanzwisisa sei zvakakodzera kupfeka iyi yemamiriro ekunze eVeracruz uye vakatanga kusiya madhirezi avakange vauya nawo kubva kuSpain.
Sekusanganiswa kwejasi remuno nemamwe maitiro evaSpanish, iyo sutu yejocho, iyo yakagamuchirawo mafomu akafanana evarume. Zvaive, saka, maitiro ekutanga pakati peninsular fashoni neyekuzvarwa kubva kuSotavento Veracruzano. Mukuwedzera, zvishongedzo uye zvishongo zvakawedzerwa kwazviri.
Kana tangoita zvishoma nhoroondo, inguva yekutsanangura zvine mutsindo uye zvakadzama kuti zvakajairika zvipfeko zveVeracruz zvakaita sei.
Yakadii sutu yejocho
Zvine musoro, kurondedzera zvakajairika zvipfeko zveVeracruz, isu tinofanirwa kusiyanisa pakati pezvipfeko zvevakadzi neizvo zvevarume Nekudaro, zvese zviri zviviri zvine mbiri madhinomine: chena ruvara uye machira akareruka yakakodzera kupisa.
Iyo chaiyo Veracruz koshitomu yevakadzi
Iyo jarocha zvipfeko zvevakadzi ndizvo zvakatonaka kupfuura izvo zvakaitirwa varume, sezvo iine mamwe machira, machira uye zvishongo. Izvo zvinhu zvekutanga zveiyi jasi ndizvo zvinotevera:
Bhurauzi yemhando nightgown chena yakagadzirwa nedonje uye "mesh" pamapfudzi nepachipfuva. Izvi zvinoreva kuti, mune izvo zvikamu, vane zvishongo muchimiro che gridhi. Uye zvakare, zvakapedzwa pamutsipa nebharrette rakagadzirwa nerabhoni yesilika.
Petticoat zvakare chena uye zvakare gridded pazasi iyo inoshandiswa senge kumashure.
Una siketi refu uye yakafara kubhururuka pamusoro petikiki iyo inovhara makumbo uye iyo zvakare inowanzo chena. Saizvozvo, yakashongedzwa nayo nezvakarukwa uye ndaimbova nayo chidimbu cheglue.
Apron ipfupi muvelvet nhema uye yakashongedzwa nemaruva akatsvukuruka-toni uye zvakare rakamonana tambo Yakasungirirwa muchiuno nenzira ye siriki ribhoni uye pachiuno chake pane chiuno bandana yakagadzirwa nekotoni, ndiko kuti, hengechefu hombe yakagadzirwa nemaviri-mavara akadhindwa machira.
Una mantilla kana shawl inogona kugadzirwa netambo kana yakashongedzwa tulle. Inoiswa pamapfudzi akasungirirwa pachipfuva pachishandiswa a kukiya kana kuuya kujekesa mesh yenguo yehusiku pasi.
Un shawl kana chechipiri shawl yakashongedzwa zvakagadzirwa neshinda tambo uye inosanganiswa neribhoni rinoshongedza bvudzi.
Mukadzi akapfeka jasi rejachocho
Pamwe chete nezvose zvataurwa pamusoro apa, zvakajairika zvipfeko zveVeracruz zvevakadzi zvinosanganisira zvishongedzo zvakasiyana y rimwe bvudzi. Nezve iyo yekupedzisira, inoumbwa nebundu uye maviri mabhureki ayo akashongedzwa neheaddress semuzinga, unonzi zvakare cachirulo. Chekupedzisira, vhudzi rakashongedzwa negardenias kana marosi anoiswa kune rimwe divi kana rimwe remusoro zvichienderana nemaroo emurume. Kana asina kuroorwa, vanoenda kuruboshwe, nepo kana akaroora, vanoenda kurudyi.
Kana zviri izvo zvekushandisa zveyakajairika Veracruz koshitomu yevakadzi, a fan yakaturikwa pamutsipa nenzira ye collar. Izvi zvinowanzo kuve chishongo chemhuri. Inogona kugadzirwa nendarama kana maparera, asiwo coral kana filigree. Chekupedzisira, mune dzimwe nguva muchinjikwa unopfekedzwawo wakakomberedza mutsipa neribhoni revelvet.
Iyo yakajairika koshitomu yeVeracruz yevarume
Zvakawanda zvakareruka kuti izvo zviri pamusoro ndizvo zvakajairwa Veracruz zvipfeko zvevarume. Nekudaro, iyo zvakare yakanaka kwazvo uye, sekukuudza kwatakaita, inomira kunze kune chena ruvara rwehembe dzese. Mune ino kesi, iyo inonyanya kukosha ndeiyi inotevera:
Un burugwa yemucheka mutsva unosvika kutsoka, ndiko kuti, kusiyana nemamwe mapfekero akajairwa, haina hombodo kana kureba kwemabvi.
Una guayabera kana hembe ine maoko marefu, akasununguka uye zvakare akagadzirwa nemucheka wakareruka une mabhegi kumberi. Iyo zvakare inowanzo ine inoteterera kuti iipe iyo kubata kweiyo runako.
Nyora shangu loot uye dema kana chena ruvara.
Ngowani yemichindwe ine matanda mana munzvimbo yayo yepamusoro (iyo inonzi "matombo").
Kupora kana hangechepfu hombe mumavara anopenya, ndoda kutsvuka uye nhema, kutenderedza mutsipa.
Sezvatakatsanangurira iwe uye iwe uchigona kutsanangudza kubva kutsananguro yedu, yakajairika koshitomu yeVeracruz yevarume yakanyanya kusarudzika kupfuura yevakadzi. Zvisinei, inosangana zvakakwana neichi.
Boka revagari veVeracruz neyakajairika koshitomu
Jasi rejalocho rinoshandiswa riinhi
Kazhinji, jasi rejachocho rinoshandiswa mukati chero chiitiko chevanhu kana zororo rinopembererwa mudunhu reVeracruz. Mapoka mazhinji echinyakare emitambo anoishandisa, chaizvo, kududzira iyo Ivo jarocho kana zapateado. Kune mhando mbiri dzekutamba: vaviri vanonzwika neiya inonzi "Kubva pamurwi" yekutamba muboka.
Mumhanzi unotevera unoimbwa nawo zvakafanana zviridzwa zvechinyakare senge jarana, gitare diki; izvo zvinodiwa, kubva kumhuri imwechete seiya yapfuura; Rudimbwa, ngoma, uye shaya dzedhongi, iyi yekupedzisira ndiyo inoridzwa. Kuburikidza navo ese anodudzirwa nziyo dzevarombo, mamwe acho ave nemukurumbira pasi rose. Semuyenzaniso, La Bamba, Iyo hustler o Iyo yakapusa sirasi.
Dzinodudzirwawo huapangos, nziyo munguva yeternary siginecha inotangira mudunhu, uye kunyange mutinhimira wekuAfro -Caribbean mavambo senge inozivikanwa yeCuba danzón.
Kune rimwe divi, iwe unozofarirawo kuziva kuti mhemberero idzi dzinoitika riini. Nekudaro, kana iwe ukaronga kushanyira Veracruz, unogona kuita kuti rwendo rwako ruwirirane navo. Rimwe remazuva rakaratidzirwa ndere iyo yemafaro kubva kuguta reVeracruz pacharo, rinotsanangurwa se "rinofara kwazvo pasirese."
Asi nyika yeJarocho yawana pekugara muguta re Jaltipan, kubva mudunhu reVeracruz pachayo. Pakupera kwegore guta iri rinoronga iyo Fandango Mutambo, iyo inounza pamwe vanozivikanwa vemimhanzi maartist kubva kumatunhu ese epasi uye kunyangwe kunze kwenyika. Naizvozvo, mitsindo yejarocho nemadhanzi hazvigone kusavapo muchiitiko ichi.
Saizvozvo, tsika yeJarocha ine midzi yakadzika muguta reCórdoba, inonziwo Lomas de Huilango, kusvika padanho rekuronga a Mwanakomana Jarocho Kusangana iyo inosanganisira zvinoratidzira neyakajairika jasi reVeracruz. Asi zvakare zvimwe zviitiko zvakaita semasangano, misangano, misangano uye kunyange gala mabasa ekuchengetedza iyi tsika yechinyakare yenyika yeVeracruz.
Pakupedzisira, isu tichakuudza nezve iro guta re Tlacotalpan, iyo iri chaizvo pamiganhu yebheseni rePapaloapan, uko, sezvatakakuudza, jasi rejocho rakazvarwa. Mutaundi rino rakanaka, iro rine nhoroondo nzvimbo rakaziviswa Tsika nhaka yeHumanity, inopembererwa pa Musangano weJaraneros uye maDimimistas. Iwo mutambo wakakumikidzwa kuchengetedza ese emimhanzi matauriro akaiswa mumwanakomana jarocho uye iri pakati pezvakakosha zviitiko zvevanhu mu Mexico yese.
Mukupedzisa, isu takutsanangurira iwe kuti kwakabva kupi yakajairika koshitomu ye Veracruz, pamwe nembatya dzinozvigadzirira vakadzi nevarume. Uye, saizvozvowo, ndeapi mhemberero dzakakurumbira kuupfeka. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemapfekero echinyakare ane yakadzika midzi uye inokosheswa munyika yese yeMexico.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Mekisiko » Iyo yakajairika koshitomu yeVeracruz
Kufamba uchitevedza Costa Dorada: Chii chaungaone uye zvekuita